Rosehip iyathandwa kabanzi emhlabeni wonke. izingxenye Imithi kukhona izithelo hhayi kuphela, kodwa futhi amaqabunga ayo, imbewu, izimbali kanye nezimpande. Uma lokhu kuyisimangaliso ikhambi lemvelo kayikhuli ezweni lakho, ungakhathazeki - ungakwazi ukuthenga ngasiphi ekhemisi.
Rosehip: izakhiwo ewusizo.
Lokhu izithelo has inqwaba kakhulu izakhi mkhondo kanye nezakhi. Ngaphezu kwalokho, lisaqukethe, futhi vitamin C, okuyinto umyalo sezingeni elikhulu ukwedlula, isibonelo, lemon, amavithamini B, P no K, ascorbic acid, amaminerali, magnesium, ithusi, i-potassium, i-phosphorus, i-iron, manganese, nabanye. Kubaluleke ngokukhethekile ukuba badle izithelo ngesikhathi entwasahlobo ka beriberi, lapho umzimba ongawamukeli izakhi eziningi ezinkulu. Rosehip - indlela enhle kakhulu ubuyisele ukulingana futhi ubuhle isikhumba sowesifazane, kungakhathaliseki inkathi yonyaka.
In izicelo yezokwelapha, ungasebenzisa decoction ezithelweni lesi sitshalo, okuyinto has isinyathelo eqeda ukuvuvukala, elwa namagciwane kanye elwa namagciwane. Ngokungangabazeki, rosehips, izakhiwo ewusizo okuyinto zisetshenziselwa ukwelapha ukucinana kwemigudu yokuphefumula, Izifo ukuvuvukala umgudu wokuphefumula kubangelwa umkhuhlane, naye nethonya elikhulu elihle umsebenzi esiswini, ukunciphisa ezithathelwanayo isifo samathumbu, izilonda, yokudleka kolwelwesi lwesisu, amajaqamba esiswini, nesifo, normalizes izinso, isibindi uyazihlanza.
Izithelo zalesi sitshalo nethonya elihle ku- isimiso sokujikeleza kwegazi lomuntu, eqinisa Imithambo yegazi. Isifo sokuqina kwemithambo yegazi, thrombosis, thrombophlebitis nezinye izifo eziningi kungagwenywa ngokudla amajikijolo zonke izinhlobo zokupheka.
Tincture rosehip kusiza kulabo abaphethwe khona amatshe esinyeni, kuthuthukisa Bile uketshezi, esiswini, ngomgudu womchamo, kuthuthukisa umzimba.
Umhluzi kusuka amajikijolo kanye namahlamvu possesses tonic kakhulu, tonic nomphumela wokunciphisa. Ngaphezu kwalokho, ukhonza ukuqinisa omzimba omuntu. Imisebenzi uhlelo endocrine, ekuqiniseni amathambo izicubu zomzimba womuntu futhi encike ngqo kwi njalo ukusetshenziswa infusions kanye Iziphungo umbungu.
Uma kukhona rose, izakhiwo ezuzisayo ingasetshenziswa ukusetshenziswa ongaphandle ezimweni eziphuthumayo. Iziphungo ukusiza abantu ukuthi bakuthole kulula ukudlulisa ukulunywa yizinambuzane, ukusha, frostbite, urticaria, nokuningi. A decoction impande kusiza abantu ukulwa nezifo ezifana rheumatism nokukhubazeka. By the way, rose zasendle yilona khambi kunazo zonke izinto ezingenzeka iyoshiswa abantu babo bonke ubudala. kubalulekile ikakhulukazi kubantu abadala rose okhalweni - ingcindezi at ukusetshenziswa isithako nomuthi futhi Iziphungo evamile.
Itiye, zezinkambi amakhambi nama infusions - indlela eyingqayizivele ukuze ahlanze umzimba, bayosiza ekubuyiseleni ngemva isifo, nethonya ezuzisayo phezu kwama-hormone ibhalansi yokutakula. Ukuze womshini izidakamizwa nezinye izakhamzimba zokwelapha ezisetshenziswayo rosehips lonke sisonke, kodwa e isithelo izakhamzimba eziningi.
Rosehip, izakhiwo ewusizo ezisiza ukuze sikhuthaze nezindlala ngokocansi kanye nemisebenzi baze bakwazi ukusiza ukuzinza zokuphila ubulili, udinga ukudla kaningi ngangokunokwenzeka. Kodwa konke lokhu kusebenza futhi nakulabo abantu njalo afake ekudleni kwakho okhalweni kunoma yiluphi uhlobo.
Zikhona ongakhetha eziningi ukupheka zasendle rose. Indlela ejwayelekile kakhulu futhi elula kanje: omunye isipuni izithelo kudingeka uthele amanzi abilayo (cishe izinkomishi). Lokhu ngokuvamile kwenziwa ngendlela thermos futhi ushiye sokunika ubusuku.
Lokhu ukumnika kufanele esiphuza kathathu ngosuku isigamu ingilazi ngaphambi kokudla. ukusetshenziswa njalo ukumnika kuyasiza kulesetayelekile nemisebenzi zonke zomzimba, kanye usizo lokuvuselela impilo futhi ukahle kakhulu.
Indlela yokwenza tincture utshwala kanye amajikijolo